वित्तीय योजना : कसरी सुरु गर्ने ? कसरी वनाउने ? (केही महत्वपूर्ण टिप्सहरु) ~ Banking Khabar
वित्तीय योजना : कसरी सुरु गर्ने ? कसरी वनाउने ? (केही महत्वपूर्ण टिप्सहरु)
बैंकिङ खबर । हामी समृद्ध हुन चाहन्छौं, धनी हुन चाहन्छौं र खुशीको साथ जीवन बिताउन चाहन्छौं । अर्कोतर्फ, हामी काम शुरू गर्दछौं र पहिलो तलबमै पैसाको अभावमा गर्न नपाएका हरेक इच्छाहरू पूरा गर्न थाल्छौं । यो चक्र जारी रहन्छ । कहिले महँगो ग्याजेटहरू, कहिले महँगो लुगा र जुत्ताहरू, कहिले ड्रीम डेस्टिनेशनमा जाने, यस पछि, खर्चमा कुनै नियन्त्रण हुदैँन । तलब जति सबै क्रेडिट कार्ड दैनिक वस्तु र आवश्यक काममा नै सकिन्छ । विडम्बना यो हो कि हामी हाम्रो भविष्यका लक्ष्यहरू नसोची खर्च र ऋणको दलदलमा फसीसक्छौं । के तपाईंले कहिल्यै सोच्नुभएको छ ? कुनै पनि व्यक्तिको जीवन, उसका सपनाहरू, जिम्मेवारीहरू र आकांक्षाहरूको बीचमा घुम्छ । यी सबैको लागी पैसा चाहिन्छ । हरेक व्यक्तिको जीवनका निश्चित लक्ष्यहरू हुन्छन् जस्तै घर किन्नु, अध्ययन गर्नु र विवाह गर्नु, आरामदायी रिटायरमेंट आदि । त्यहाँ धेरै आवश्यकताहरू र कम संसाधनहरू छन् । तिनीहरू बीच वित्तीय लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न, तपाईंलाई एक वित्तीय योजनाको आवश्यकता पर्दछ । तपाईंको वित्तीय योजना जत्ति बलियो छ, तपाईंको भविष्य पनि त्यतिनै आनन्दित हुनेछ र तपाईं आर्थिक रूपमा अझ समृद्ध हुनुहुनेछ ।
वित्तीय योजना के हो ?
वित्तीय योजनाको प्रक्रिया एकदम सरल छ । विज्ञ भन्छन् वित्तीय योजनाको सम्पूर्ण प्रक्रियामा तपाईले पहिले आफ्नो लक्ष्यहरु पहिचान गर्नु पर्छ र प्राथमिकता दिनु पर्छ । त्यसपछि वर्तमान आर्थिक अवस्थाको विश्लेषण गर्दा यसको सीमित स्रोतहरू आर्थिक लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न प्रयोग गरिन्छ । तपाईं आवश्यक भएमा तपाईंको नगदी प्रवाह अनुसार वित्तीय लक्ष्यहरूमा परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ । यसलाई समय समयमा समीक्षा पनि गर्नु आवश्यक छ । अब, वित्तीय योजना कसरी सुरु गर्ने भन्ने बारेमा कुरा गरौं ।
वित्तीय योजनाको सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा कति पैसा आउँदैछ र कहाँ जाँदैछ भनेर हेर्नु हो । कमाउन सुरु गर्ने बित्तिकै देखि बजेट बनाएर चल्नुपर्छ । यसमा तपाइँका सबै खर्चहरू लेख्नुपर्दछ र अनपेक्षित खर्चहरूमा तपाइँ कसरी तपाइँको नगदी प्रवाहलाई पूरा गर्नुहुनेछ भनेर प्रावधान प्रदान गर्नुपर्दछ ।
भविष्यमा हुनसक्ने कुनै पनि अप्रत्याशित खर्चहरू पूरा गर्न आपतकालीन कोष सिर्जना बनाएर अघि बढ्नुपर्छ । सामान्यतया, मानिसहरूले आपतकालिन अवस्थाको लागि छुट्टै कोष निर्माण गर्दैनन् । जब आपतकालिन अवस्था आउँछ, उनीहरूले आफ्नो इन्वेचस्टmमेंटबाट पैसा निकाल्नु पर्छ । भविष्यमा कुनै पनि अप्रत्याशित खर्चहरूको लागि पर्याप्त रकम छुट्याउनुहोस् । अब प्रश्न आउँछ इमरजेंसी फंडको रूपमा कति पैसा राख्नु पर्छ ? विज्ञका अनुसार इमरजेंसी फंड एक व्यक्तिको मासिक खर्चको कम्तिमा ६ गुणा हुनुपर्दछ । दुई महिना बराबरको नगद र बाँकी रकमलाई फिक्ड्सी डिपाजिट र शर्ट टर्म फंडमा राख्न सकिन्छ । यो फंड जागीर जाँदा वा अन्य प्रतिकूल परिस्थितिहरूमा काम आउछ र तपाईंको लगानी पनि प्रभावित हुँदैन ।
बीमाले दुर्घटना वा मृत्यु जस्ता अप्रत्याशित परिस्थितिहरुमा तपाइँको परिवारका सदस्यहरु र आश्रितहरु लाई आर्थिक क्षति प्रदान गर्दछ । तपाईंको बीमा आवश्यकता मूल्यांकन गर्नुहोस् र त्यसैअनुसार जीवन बीमाको सुविधा लिनुहोस् । विज्ञका अनुसार जीवन बीमा सामान्यतया एक व्यक्तिको वार्षिक आम्दानीको १०,१२ गुणा हुनुपर्दछ । तर यो एक व्यक्तिको आय, उमेर र दायित्वमा निर्भर गर्दछ ।
आज, एउटा राम्रो अस्पतालमा एक सानो बिरामीको उपचारले तपाईंको आर्थिक स्वास्थ्य बिगार्न सक्छ । किनकि उपचार लागत दिनदिनै बढ्दै छ । यदि परिवारको कुनै सदस्य बिरामी परे भने कहिलेकाँही सम्पूर्ण लगानी जाने वा धेरै खर्च गर्ने सम्भावना हुन्छ । त्यसकारण, तपाईले स्वास्थ्य बीमा लिनु राम्रो हुन्छ ।
लगानीको भूमिका तपाईको वित्तीय लक्ष्यहरु हासिल गर्न को लागी सबै भन्दा महत्वपूर्ण छ । लगानी लक्ष्य संग जोड्नु पर्छ । तपाई १ वर्ष पछि कार किन्न चाहानुहुन्छ, ५ बर्ष पछि घर वा तपाईले आफ्नो बच्चाको शिक्षा वा विवाहको लागि बचत गर्न चाहानुहुन्छ वा रिटायरमेंटपछि आरामदायी जिवन जिउँन लगानी गर्न चाहानुहुन्छ । तपाईंको लगानी त्यस्ता लक्ष्यहरूमा बाँध्नुपर्दछ । लक्ष्य अनुसार लगानी गर्नुहोस् । लक्ष्य प्राप्त नभएसम्म कुनै पनि लामो अवधिको लगानी छुनुहोस् ।
तपाईंको वित्तीय लक्ष्यहरू तब प्राप्त हुन्छ जब तपाईंले आर्जित सम्पत्ति उचित उत्तराधिकारीमा जान्छ । ठूला परिवारका सदस्यहरूले पनि आफ्नो हिस्सा लिन धेरै संघर्ष गर्नुपरेको छ । यदि तपाईंले एक उत्तराधिकारी योजना गर्नुभएको छैन भने, तपाईंको पति वा पत्नी र बच्चाहरूले कष्ट भोग्नु पर्ने हुन सक्छ । त्यसैले समयमै तपाईको सम्पत्ति तपाईको उत्तराधिकारीलाई उचित वितरणको लागि योजना गर्नुहोस्, कागजात तयार गर्नुहोस् र तपाईको सम्पत्तिलाई कुनै पनि प्राकृतिक आपतकालबाट आर्थिक रूपले सुरक्षित गर्नुहोस् ।
तपाइँको ट्याक्स योजना प्रत्येक वित्तीय वर्षको शुरूबाटै सुरू गर्नुहोस् र यस वस्तुमा केही लगानी राख्नुहोस् । यदि तपाईंले करको प्रावधान दिमागमा राख्नुभयो भने तपाईं अन्तिम मिनेटमा कुनै गल्ती गर्नुहुने छैन र तपाईंको नगदी प्रवाह बर्षभर नै रहन सक्छ ।
वित्तीय योजनाको कार्यान्वयन पछि पनि, यो महत्वपूर्ण छ कि तपाईंले आफ्नो पोर्टफोलियोको प्रदर्शनमा नजर राख्नुहुनेछ । वास्तवमा, अधिकांश व्यक्तिहरू गल्ती गर्छन् उनीहरू योजनासँग जोडिदैनन् जसबाट पछि उनीहरूले नोक्सान व्यहोर्नुपर्छ । ध्यानमा राख्नुहोस् कि एक वित्तीय योजना तयार गर्नु त शुरू मात्र हो । सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा ते योजनालाई अनुशासित तरीकाले कार्यान्वयन गर्नु हो । यदि तपाईं यससँग धैर्यवान रहनुभयो भने, अनुशासित हुनुहुन्छ, तपाईं आफू र तपाईंको परिवारलाई अद्भुत भविष्य दिन सक्नुहुन्छ ।
नेप्सेमा करिब ६ अर्बको शेयर कारोबार ( डेढ बजेको अपडेट )
चन्द्रागिरी हिल्सले सर्वसाधारणको लागि पुस १ गतेदेखि आइपिओ निष्कासन गर्ने